အပြောအဆို | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » အပြောအဆို
Posted by ဘဲဥ on Jun 1, 2012 in My Dear Diary | 21 comments
ကျနော်တို့ အလုပ်သွားလုပ်ဖူးတဲ့ ကချင်ပြည်နယ်က ဒေသလေးတစ်ခုမှာပေါ့ဗျာ ၊ ဗမာစကားသိပ်မပေါက်တဲ့ (ဗမာစကားသိပ်မပြောတတ်)တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ အလုပ်တွဲလုပ်ရတယ်။ ကျနော်တို့ ကျောင်းပြီးခါစ အလုပ်ခွင်စဝင်တဲ့အချိန် ဆရာတွေကလက်တွဲခေါ်ပေးတာပေါ့ဗျာ။ ကျနော်တို့ကတော့ ဆရာကို ဆရာလို့ပဲခေါ်တာပေါ့ဗျာ ၊ရွာသားတွေခေါ်တာက ဟေ့ကောင်ဆရာတဲ့(ဟီးးး အဲ့ဒီမှာစလွဲတာပဲ)
သူတို့ကိုရိုင်းတယ်လည်းပြောလို့မရဘူးလေ၊ သူတို့မှ ဗမာစကားကို ရေရေလည်လည်မပြောတတ်တာကိုး။
တစ်နေ့ကျတော့ဆရာက ရွာသားတွေကိုမေးတယ် ၊ မင်းတို့တွေထဲမှာ မုဆိုးလုပ်တဲ့လူပါလားပေါ့ ၊ ရွာသားတစ်ယောက်က သူ့အဖေက မုဆိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြတယ်၊ ဆရာကလည်း တွေ့ချင်တယ် ခေါ်ခဲ့ပါလို့ပြောတာပေါ့၊ ရွာသားကလည်း ရွာပြန်ပြီးသူ့အဖေကိုသွားခေါ်လာတာပေါ့ ၊ သူ့အဖေလည်းပါလာပါတယ် ၊ ဆရာနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးတဲ့အချိန်ပြောတဲ့စကားလေး ရေလည်လန်းဒယ် ရွာသူားတွေ မှတ်ထားနော် ပြောပြမယ်…
ဟေ့ကောင်ဆရာ မင်းတွေ့ချင်တဲ့ ငါ့အဖေဆိုတာ ဒီကောင်ဘဲ တဲ့
ဒါ တော်တော်ပြောတတ်တယ်ခေါ်ရအုံးမှာပေါ.။ လုံးဝ မြန်မာစကား နားမလည်၊ မပြောတတ်တဲ.သူတွေ အများကြီးရှိအုံးမှာ။
မြို့ကလာတဲ့ဧည့်သည်တွေကို နေ့လည်စာနဲ့ ဧည့်ခံနေတုန်း
အောက်ထပ်က ကလေးတွေဆူညံနေလို့ လှမ်းအော်လိုက်တယ်တဲ့
အဲဒါကို ဘာအော်လဲသိချင်လို့မေးတော့ အိမ်ရှင်ကာံသာပြန်ပြတယ်
စားစားငတ်သလောက်စားနော် တဲ့
ကျနော်တို့ ရွာဘက်မှာလည်း သိပ်တော့ မထူးပါဘူး ..
ခင်ဗျား … ကျုပ် … တွေပဲ အသုံးများတယ် ..
ပြီးတော့ … ဟိုဟာလေး ပေးပါ လို့ မသုံးတတ်ဘူး .. ဟိုဟာလေး ပေး “စမ်း” ပါ … လို့ပဲ သုံးတာ များတယ်ဗျ ..
မသိရင်တော့ အမိန့်ပေးတဲ့ ပုံစံနဲ့ ခိုင်းလိုက်သလိုပေါ့ဗျာ …
ပြီးတော့လည်း ဒီထဲက အတိုင်းပဲ ..
ကျနော့်ညီက ကျနော့်ကို ခေါ်တတ်တယ်ဗျ ..
ဟေ့ကောင် ကိုကို …. တဲ့ ….
ရန်ကုန်က လူတွေကတော့ ဒီလိုသုံးရင် မိုက်ရိုင်းတယ်လို့ ထင်တယ်ဗျ ..
ဒါကြောင့် ရန်ကုန် စရောက်ကာစတုန်းက ဒီအသုံးအနှုန်းတွေကို အတော် ဖျောက်ယူခဲ့ရတယ် ..
အဲဂဒါကိုက တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ စရိုက်ဗျ။
သူတို့က ရူးကြောင်ကြောင်နဲ့ ပူးမသတ်ဘူး။မဖျက်ဆီးဘူးဗျ။
ဆက်ရေးပါ ထပ်ဖတ်ချင်သေးတယ်။တိုလို့ ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်ဖြစ်သွားဒယ်………
ဖတ်ပြီး အားရပါးရ ရီပြီး မှ ကိုယ့်မျက်နှာကိုယ်ပြန် မြင်လိုက်ပြီး မချိပြုံး ဖြစ်သွားတယ်။
ကိုယ်က သူများတိုင်းပြည်မှာ သူများစကားပြောနေရတာမို့ အရီး ဆို ဒီမှာ သူ့ထက်တောင် ဆိုးတဲ့ စကားတွေ နဲ့ ပေါ့။
ကိုယ်ရဲ့ ငပိသံ ရယ်၊ မှားတဲ့ ဂရမ်မာတွေ ရယ် နဲ့ အရီခံရပေါင်း များပါပေါ့။
ကျောင်းတုန်းက သူငယ်ချင်း တိုင်းရင်းသားတစ်ယောက်က ကျမတို့တစ်တွေကို ကောင်မတွေ လို့ ခေါ်လို့ စိတ်ဆိုးကြတယ်။ သူနဲ့ တော်ရုံစကားမပြောဖြစ်အောင် ရှောင်ကြတယ်။ နောင်ကြာတော့မှ သူ့အကြောင်းသိသွားပြီး ကောင်မတွေ လို့ ခေါ်တာ ရိုင်းရာကျကြောင်း၊ အဲဒီအစား ကောင်မလေးတွေ လို့ ခေါ်ရတယ်လို့ သင်ပေးလိုက်မှပဲ အဆင်ပြေသွားတော့တယ်။
ဟေ့ကောင် ကိုကို လို့ခေါ်ရတာပဲ….
မိဘ ကွယ်ရာမှ ဟေ့ကောင်
အိမ်မှာ ကိုကိုလို့ မခေါ်ရင် ဗျင်းခံရလို့သာ
ဟေ့ရောင် သဂျီးကို ပြေးပေးပါ
ဟေ့ရောင် ငဗိုက်ကို ဘီအီးဖိုး တစ်သိန်းလောက် ချီးဘာလို့ 
ဟေ့ရောင်ငဗိုက် မင်းချီးချင်ဒဲ့ တဂျီးမင်းချိုဒါ ဟီးးးးးးးးး အမေဒစ်ကန်မှာ
အလှူသွားတုန်းကလေ ကြောင်ဝတုတ်နဲ့ မိတိုက်နဲ့ ညားခဲ့တယ်မလား ..
(P.S — ညားသည် = တွေ့သည် ) ဟိဟိ
ကြောင်မျိုးနွယ်ကို အရပ်ပုပုတော့ အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဟေ့…
နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ် ဆဲတာလေးနှစ်ခုပါလို့ ခွေးလွှတ်ကြပါလို့ ကြိုတင်တောင်းပန်ထားပါတယ်၊
ဗိုလ်ကြီး ။ ။ ရဲဘော် အိပ်လှချည်လားကွ
ရဲဘော် ။ ။ အိပ်နိုင်မှ စားနိုင်မှာလေ ဗိုလ်ကြီးရဲ့
ဗိုလ်ကြီး ။ ။ ရဲဘော် စားလှချည်လားကွ
ရဲဘော် ။ ။ စားနိုင်မှ လုပ်နိုင်မှာလေ ဗိုလ်ကြီးရဲ့
ဗိုလ်ကြီး ။ ။ ရဲဘော် ရှေ့တန်းထွက်
ရဲဘော် ။ ။ ငါလိုးမဗိုလ်ကြီး လီးစကားမပြောနဲ့
ခွီး .. ခွီး … ခွိ ..
တော်တော် အားကိုးရမယ့် ရဲဘော် ..
ငဗိုက် အတိုင်းပဲ .. (အဲ့ဒါ ဘာမှဟုတ်ဘူး ကပ်ဖဲ့ဒါ)